Chinangwa chaMwari Chichazadzika! | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Ndakazvitaura; ndichazviunzawo. [Zvandakaronga], ndichazviitawo.”—ISA. 46:11.
NZIYO: 147, 149
Jehovha akasikirei vanhu?
Nei chinangwa chaMwari chisati chazadzika?
Chinangwa chaJehovha chichazadzika sei?
1, 2. (a) Jehovha akaita kuti tizive chii? (b) Ivimbiso ipi yatinowana pana Isaya 46:10, 11 uye 55:11?
MASHOKO ekutanga eBhaibheri mashoma asi anoreva zvakawanda. Anoti: “Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika.” (Gen. 1:1) Tinongoona zvinhu zvishomanana pazvinhu zvakawanda zvakasikwa naMwari uye tinongonzwisisa zvishomanana nezvezvinhu zvakadai sechiedza nesimba rinokwevera zvinhu pasi (gravity). (Mup. 3:11) Kunyange zvakadaro, Jehovha akaita kuti tizive chinangwa chaakasikira nyika nevanhu. Nyika yakasikwa kuti ive musha wakanaka wevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. (Gen. 1:26) Vaizova vana vaJehovha uye iye aizova Baba vavo.
2 Sezvinotsanangurwa muchitsauko 3 chaGenesisi, pane zvakambovhiringidza chinangwa chaJehovha. (Gen. 3:1-7) Asi chinangwa ichocho hachina kuvhiringidzwa zvachose. Hapana anogona kutadzisa Jehovha kuita zvaakaronga. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Saka tinogona kuva nechokwadi chekuti chinangwa chaJehovha chichazadzika panguva chaiyo yaakaronga.
3. (a) Ndechipi chokwadi chinotibatsira kunzwisisa mashoko eBhaibheri? (b) Nei tiri kukurukura chokwadi ichi parizvino? (c) Mibvunzo ipi yatichakurukura?
3 Tinoziva chokwadi cheBhaibheri nezvechinangwa chaMwari chaakasikira nyika nevanhu uye kuti basa rinokosha raJesu nderei pakuita kuti chinangwa ichocho chizadzike. Chokwadi ichi chinokosha chaizvo uye chinogona kunge chiri chimwe chezvinhu zvatakatanga kudzidza patakatanga kudzidza Shoko raMwari. Isuwo tinoda kubatsira vanhu vanoda chokwadi kuti vazive dzidziso idzi dzinokosha. Panguva ino yatiri kudzidza nyaya iyi seungano, tiri kuedza kukoka vanhu vakawanda kuti vauye kuChirangaridzo cherufu rwaKristu. (Ruka 22:19, 20) Vaya vachauya vachadzidza zvakawanda nezvechinangwa chaMwari. Saka sezvo kwasara mazuva mashoma kuti Chirangaridzo chiitwe, zvakanaka kuti tifunge nezvemibvunzo yatingashandisa kuti tikurudzire vatinodzidza navo Bhaibheri nevamwewo vanoda chokwadi kuti vade kuuyawo. Tichaongorora mibvunzo iyi mitatu: Chinangwa chaMwari chaakasikira nyika nevanhu ndechei? Chinangwa chaMwari chakavhiringidzwa sei? Uye nei chibayiro cherudzikinuro chaJesu chiri icho chinovhura nzira yekuti chinangwa chaMwari chizadzike?
CHINANGWA CHEMUSIKI CHAIVA CHEI?
4. Zvisikwa zvinozivisa sei kubwinya kwaJehovha?
4 Jehovha Musiki anoshamisa chaizvo. Zvinhu zvose zvaakasika zvakanaka uye ndezvemhando yepamusoro. (Gen. 1:31; Jer. 10:12) Tingadzidzei pakunaka uye kurongeka kwatinoona pazvinhu zvakasikwa? Patinotarisa zvinhu zvakasikwa naJehovha, zvingava zvikuru kana zvidiki, tinoyemura kubatsira kwazvinoita. Tinoshamiswa nemagadzirirwo akaitwa masero emuviri wemunhu, nezvakaita kacheche kachangoberekwa, kana kuti nekuyevedza kunoita zuva kana rava kunyura. Tinoyemura zvinhu izvi nekuti takasikwa tichikwanisa kuziva zvinhu zvakanaka.—Verenga Pisarema 19:1; 104:24.
5. Jehovha akaita sei kuti zvisikwa zvake zvose zvishande pamwe chete zvakanaka?
5 Jehovha akaisa mitemo inodzora zvisikwa zvake zvose kuti zvishande pamwe chete zvakanaka. (Pis. 19:7-9) Saka zvinhu zvose zvakasikwa zvine nzvimbo yazvo uye zvinoshanda maererano nebasa razvo muchinangwa chaMwari. Jehovha akaisa mitemo yekuti zvisikwa zvake zvinofanira kushanda sei pamwe chete. Semuenzaniso, mutemo wegravity unoita kuti mhepo yakapoteredza nyika irambe iri munzvimbo yayo, unodzora mvura yemumakungwa uye unobatsira kuti zvinhu zvirambe zvakarongeka kuti panyika pararamike. Zvinhu zvose zvakasikwa, kusanganisira vanhu, zvinodzorwa nemitemo iyi. Zviri pachena kuti kurongeka kwakaita zvinhu zvakasikwa kunoratidza kuti Mwari ane chinangwa chaakasikira nyika nevanhu. Patinenge tiri muushumiri, ngatibatsirei vanhu kuti vazive Musiki wezvinhu izvi zvinoshamisa.—Zvak. 4:11.
6, 7. Ndezvipi zvimwe zvipo zvakapiwa Adhamu naEvha?
6 Chinangwa chaJehovha chaiva chekuti vanhu vararame nekusingaperi pasi pano. (Gen. 1:28; Pis. 37:29) Akapa Adhamu naEvha zvipo zvakawanda zvinokosha zvaiita kuti vanakidzwe neupenyu. (Verenga Jakobho 1:17.) Jehovha akavasika vaine rusununguko rwekusarudza, vachikwanisa kufunga, kuratidza rudo uye kushamwaridzana nevamwe. Musiki akataura naAdhamu ndokumuudza zvaaifanira kuita nezvaaisafanira kuita. Adhamu akadzidza kuzviriritira, kuchengeta mhuka uye kurima. (Gen. 2:15-17, 19, 20) Jehovha akasikawo Adhamu naEvha vachikwanisa kuravidza, kubata, kuona, kunzwa uye kunhuwidza. Izvi zvaiita kuti vakwanise kunakidzwa nezvinhu zvakanaka zvavaiva nazvo muParadhiso yavaigara. Adhamu naEvha vakanga vaine basa rakawanda rinogutsa uye vaikwanisa kuramba vachiona uye vachidzidza zvinhu zvitsva nekusingaperi.
7 Chii chimwe chaibatanidzwa pachinangwa chaMwari? Jehovha akasika Adhamu naEvha vachikwanisa kubereka vana vasina chivi. Mwari aida kuti vanhu varambe vachiberekana kusvikira vazadza nyika yose. Aida kuti Adhamu naEvha nevabereki vose vaizovapo vade vana vavo sekuda kwaiita Jehovha vana vake vekutanga. Jehovha akapa vanhu nyika nezvinhu zvose zvinokosha uye zvakanaka zviri mairi. Vaizofanira kugara panyika nekusingaperi.—Pis. 115:16.
CHII CHAKAVHIRINGIDZA CHINANGWA CHAMWARI?
8. Nei Jehovha akapa Adhamu naEvha mutemo uri pana Genesisi 2:16, 17?
8 Pasina nguva, chinangwa chaMwari chakabva chavhiringidzika. Chii chakaitika? Jehovha akapa Adhamu naEvha mutemo usina kuoma waizoratidza kuti vaiziva here paigumira rusununguko rwavo. Akati: “Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta. Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.” (Gen. 2:16, 17) Zvakanga zvisina kuoma kuti Adhamu naEvha vanzwisise mutemo uyu. Uye zvakanga zvisina kuoma kuuteerera nekuti vaiva nezvimwe zvekudya zvakawanda zvekuti vaisambozvipedza.
9, 10. (a) Satani akapomera Jehovha kutii? (b) Adhamu naEvha vakasarudzei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
9 Achishandisa nyoka, Satani Dhiyabhorosi akanyengedza Evha kuti asateerere Baba vake, Jehovha. (Verenga Genesisi 3:1-5; Zvak. 12:9) Satani akashandisa nyaya yekuti vanhu vaisabvumirwa kudya “miti yose yomumunda.” Zvaiita sekuti aiti: ‘Saka hamugoni kuita zvamunoda?’ Akabva anyepa zviri pachena achiti: “Chokwadi hamungafi.” Zvadaro, akaedza kuita kuti Evha aone sekuti aisafanira hake kuteerera Mwari. Akati: “Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa.” Satani aireva kuti Mwari aisada kuti vadye muchero wacho nekuti waizoita kuti vavhurike maziso. Satani akabva amupa vimbiso yenhema achiti: “Muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”
10 Saka Adhamu naEvha vaifanira kusarudza zvekuita. Vaizoita zvakataurwa naJehovha here kana kuti vaizoteerera nyoka? Havana kusarudza kuita zvakataurwa naMwari. Izvi zvakaita kuti vabatane naSatani pakupandukira Mwari. Vakaramba kuti Jehovha ave Baba vavo uye vakaramba kutongwa naye, saka akanga asingachavadzivirire.—Gen. 3:6-13.
11. Nei Jehovha asingangosiyi vanhu vachipanduka?
11 Pavakapandukira Jehovha, Adhamu naEvha vakabva vava nechivi. Kupanduka kwavakaita kwakavaparadzanisa naJehovha nekuti ‘maziso ake akachena zvokuti haangatarisi zvakaipa.’ Saka Jehovha haangosiyi zvakaipa zvichiramba zvichiita. (Hab. 1:13) Kudai asina zvaakaita nekupanduka kwaAdhamu naEvha, zvisikwa zvose, zvekudenga nezvepanyika, zvaisazova nerugare uye zvaisazobatana. Uye dai Jehovha asina zvaakaita nechivi chakaitwa muEdheni, zvisikwa zvake zvaigona kusavimba naye. Asi Jehovha anoita zvinoenderana nemitemo yake, haambofi akaityora. (Pis. 119:142) Saka kupiwa kwakaitwa Adhamu naEvha rusununguko rwekusarudza kwakanga kusingarevi kuti vaikwanisa havo kutyora mutemo waMwari. Nemhaka yekupandukira kwavakaita Jehovha, vakafa uye vakadzokera kuvhu ravakanga vatorwa kwariri.—Gen. 3:19.
12. Chii chakaitika kuvana vaAdhamu?
12 Adhamu naEvha pavakadya muchero wacho, Jehovha haana kuzovagamuchira sevamwe vemumhuri yake. Mwari akavadzinga muEdheni, uye vakanga vasina tariro yekudzoka imomo. (Gen. 3:23, 24) Paakavadzinga, Jehovha akanga achiita kuti vaone magumisiro ezvavakanga vasarudza. (Verenga Dheuteronomio 32:4, 5.) Sezvo Adhamu naEvha vakanga vava nechivi, vakanga vasisakwanise kuratidza unhu hwaMwari zvakazara. Adhamu akarasikirwa neramangwana rake uyewo akaita kuti vana vake vave nechivi uye vafe. (VaR. 5:12) Akaita kuti vana vake vasava netariro yekurarama nekusingaperi. Adhamu naEvha vakanga vasingachakwanisi kubereka mwana asina chivi uye vana vavo vaizongoberekawo vana vane chivi. Kubvira paakangotsausa Adhamu naEvha, Satani Dhiyabhorosi ari kuenderera mberi nekutsausa vanhu.—Joh. 8:44.
RUDZIKINURO RUNOITA KUTI TIVE NEUSHAMWARI NAJEHOVHA
13. Jehovha anoda kuti vanhu vave nechii?
13 Asi Mwari akanga achiri kuda vanhu. Pasinei nekupanduka kwakaita Adhamu naEvha, Jehovha anoda kuti vanhu vave neushamwari hwepedyo naye. Hapana waanoda kuti afe. (2 Pet. 3:9) Saka Adhamu naEvha pavakangopanduka, Mwari akabva aita urongwa hwekuti vanhu vakwanise kuvazve neushamwari naye asi akazviita asingatyori mitemo yake yakarurama. Akazviita sei?
14. (a) Maererano naJohani 3:16, Jehovha akaitei kuti anunure vanhu pachivi nerufu? (b) Mubvunzo upi watingakurukura nevaya vanofarira chokwadi?
14 Verenga Johani 3:16. Vakawanda vatiri kukoka kuChirangaridzo vanotoziva rugwaro urwu nemusoro. Asi mubvunzo ndewekuti: Chibayiro chaJesu chinoita sei kuti pave neupenyu husingaperi? Mushandirapamwe wekukoka vanhu kuChirangaridzo, icho Chirangaridzo chacho uye kushanyira kwatichaita vanhu vanenge vapinda Chirangaridzo zvinogona kutipa mukana wekubatsira vanhu vari kutsvaga chokwadi kuti vanzwisise mhinduro yemubvunzo iwoyo unokosha. Vanhu vakadaro vanogona kufara pavanotanga kunyatsonzwisisa kuti Jehovha akaratidza kuti ane rudo neuchenjeri paakatipa rudzikinuro. Ndezvipi zvatingavaudza nezverudzikinuro?
15. Jesu akanga akasiyana sei naAdhamu?
15 Jehovha akatipa munhu asina chivi aigona kupa upenyu hwake serudzikinuro. Munhu iyeye aifanira kuva akavimbika kuna Jehovha uye aifanira kuva nechido chekufira vanhu. (VaR. 5:17-19) Jehovha akaita kuti chisikwa chake chekutanga chibve kudenga choberekwa panyika semunhu. (Joh. 1:14) Saka Jesu akava munhu asina chivi sezvaimbova zvakaita Adhamu. Asi kusiyana naAdhamu, Jesu akaita zvaitarisirwa naJehovha kumunhu asina chivi. Kunyange mumiedzo yakakura chaizvo, Jesu haana kumbobvira aita chivi kana kutyora mutemo mumwe chete waMwari.
16. Nei rudzikinuro chiri chipo chinokosha chaizvo?
16 Jesu aikwanisa kuponesa vanhu pachivi nerufu kuburikidza nekuvafira nekuti akanga asina chivi. Jesu aiva zvose zvaifanira kunge zvakaita Adhamu. Akanga asina chivi, aiita zvaidiwa naMwari uye akanga akanyatsovimbika kwaari. (1 Tim. 2:6) Jesu akava chibayiro cherudzikinuro chakavhurira ‘vazhinji’ nzira inoenda kuupenyu husingaperi. (Mat. 20:28) Saka rudzikinuro ndirwo runovhura nzira inoita kuti chinangwa chaMwari chizadzike. (2 VaK. 1:19, 20) Rudzikinuro runoita kuti vanhu vose vakatendeka vave netariro yeupenyu husingaperi.
JEHOVHA AKATIVHURIRA NZIRA YEKUTI TIDZOKERE KWAARI
17. Rudzikinuro runotibatsira sei?
17 Jehovha akatidzikinura achishandisa chipo chinokosha zvikuru. (1 Pet. 1:19) Anokoshesa vanhu zvikuru zvekuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga kuti atifire. (1 Joh. 4:9, 10) Tinogona kuti Jesu akatora nzvimbo yababa vedu vekutanga, Adhamu. (1 VaK. 15:45) Nekuita izvi, Jesu anoita kuti tiwane upenyu uyewo anotipa mukana wekuzodzoka mumhuri yaMwari. Pachishandiswa chibayiro chaJesu, Jehovha anogona kugamuchira vanhu kuti vave mumhuri yake asi asingaiti zvinopesana nekururama kwake. Zvinotifadza zvikuru patinofunga kuti vanhu vose vakatendeka vachange vasisina chivi. Chikamu chekudenga chemhuri yaMwari nechepanyika zvichanyatsobatana. Tese tichava vana vaMwari.—VaR. 8:21.
18. Jehovha achava “zvinhu zvose kuvanhu vose” riini?
18 Kupanduka kwaSatani hakuna kuita kuti Jehovha arege kuda vanhu, uye hakutadzisi vanhu vane chivi kuti vave vakavimbika kuna Jehovha. Kuburikidza nerudzikinuro, Jehovha achabatsira vana vake vose kuti vanyatsova vanhu vakarurama. Fungidzira kuti upenyu huchange hwakaita sei munhu wese “[anobvuma] Mwanakomana otenda maari” paachava neupenyu husingaperi. (Joh. 6:40) Baba vedu vane rudo neuchenjeri, Jehovha, vachazadzisa chinangwa chavo uye vachabatsira vanhu kuti vasave nechivi. Baba vedu Jehovha, vachabva vava “zvinhu zvose kuvanhu vose.”—1 VaK. 15:28.
19. (a) Kuonga kwatinoita rudzikinuro kunofanira kuita kuti tiitei? (Ona bhokisi rakanzi “ Ngatirambe Tichitsvaga Vakakodzera.”) (b) Tichakurukurei nezverudzikinuro munyaya inotevera?
19 Kuonga kwatinoita rudzikinuro kunofanira kuita kuti tiite zvose zvatinogona kuti tizivise vamwe kuti vanogona kubatsirwa nechipo ichi chinokosha chaizvo. Vanhu vanofanira kuziva kuti rudzikinuro ndiyo nzira inoshandiswa naJehovha kuti vanhu vave netariro yeupenyu husingaperi. Uyewo rudzikinuro rune zvakawanda zvarwakaita. Nyaya inotevera ichataura kuti chibayiro chaJesu chinogadzirisa sei dzimwe nyaya dzakamutswa naSatani mumunda weEdheni.
‘Ngatirambe Tichitsvaga Vakakodzera’
GORE rega rega, Zvapupu zvaJehovha zvinopa mamiriyoni evanhu mapepa ekuvakoka kuChirangaridzo. Gore rakapera takaprinda mapepa aya anenge 440 000 000 mumitauro inopfuura 530. Uchiine mapepa egore rino ekukoka vanhu kuChirangaridzo here? Zvichida rimwe remapepa awasara nawo rinogona kubatsira munhu akakodzera kuti asarudze kuuya kuChirangaridzo.—Mat. 10:11.